Ciidanka XDS oo kaashanaya kuwa AMISOM ayaa Al-shabaab kala wareegay degaanka Abiikarow oo ku yaalla duleedka Magaalada Marko ee gobolka Sh/Hoose.
Sida ay sheegeen Saraakiisha XDS ciidamada iskaashanaya ayaa degaanka Abiikarow ka weeraray labo Jiho oo ay ku sugnayeen dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab.
Ururka 26-aad ee ka tirsan Guutada 3aad ee Ciidanka Xoogga dalka ayaa la sheegay iney fuliyeen howlgalka Al-Shabaab looga saaray degaanka Abiikarow
G/Sare Xasan Maxamed Abukar oo taliyaha ururka 26aad ayaa sheegay in Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya iyo Kuwa AMISOM ay iska caabin aan sidaa u xooganeyn ay kala kulmeen Al-shabaab ka hor inta aysan kala wareegin degaankaas.
“Degaanka Abiikarow waxay Al-shabaab ku gumaadi jireen shacabka howlgalkana wuxuu yimid codsi iyo qeylo dhaan naga soo gaartay dadka halkaas ku noolaa oo si weyn u soo dhoweeyey ciidanka iskaashanaya ee ka saaray Al-shabaab, mana jirin wax khasaare ah oo naga soo gaaray howlgalkan” ayuu yiri G/Sare Xasan Maxamed Abukar.
Noloshii qadhaadheyd Part 43 Musalsal Turki af Soomaali
WARKA 23 04 2020 Garabyadii kasoo horjeeday maamulka Jubaland oo aqoonsaday madaxweyne Axmed Madoobe lana…
Warka 16 12 2016 Deegaanada ay maamusho Ahlu Suna oo si weyn looga xusay dhalshada…
Somali Forces Launch A Security Operation In Mogadishu